Zonke ii-smartphones zeNokia zithiwe thaca kwi-MWC 2019 | I-Androidsis
INokia iveza uluhlu lwayo olutsha lweefowuni kwi-MWC 2019
INokia yenye yeempawu kwiMWC 2019. Uphawu lwaseFinland, olubone ukukhula okukhulu kwintengiso kangangeminyaka eliqela, luququzelele umsitho wokubonisa kumnyhadala owawuse-Barcelona. Kwiiveki ezimbalwa emva kokuqinisekisa okufanayo. Kulo msitho, inkampani isishiya nothotho lwee-smartphones zalo nyaka. Uluhlu oluhlaziyiweyo apho sifumana izixhobo kuwo onke amacandelo.
Kuqhelekile ukuba iNokia isebenzise ubukho bayo kwi-MWC ukubonisa uluhlu lwayo lweefowuni. Kunyaka ophelileyo kudlulile kwaye kuhlelo luka-2019 luyaphindwa kwakhona. Sifumana iimodeli ezahlukeneyo, njengeNokia 210, 1 Plus, iNokia 4.2, okanye 3.2. Kwelinye icala, basishiye nabo Iflegi yeNokia 9 PureView.
Ngaphandle kwamathandabuzo, owona msitho ugqibelele wokuba uphawu lusishiyile. Kuyo basishiye noluhlu olubanzi lwezixhobo, ngazo funa ukuqhubeka nokukhula kwimarike. Kule minyaka mibini yokubuyela kwakhe kwintengiso bathengise izixhobo ezizigidi ezingama-70. Ngombulelo kweli nani, iNokia ikwazile ukuzibeka phakathi kweemveliso ezintlanu ezithengisa kakhulu kumazwe amaninzi. Ke benza inkqubela entle.
Ngolu luhlu lutsha lweefowuni bafuna ukugcina olu luhlu lulungileyo. Sikuxelela ngakumbi ngemodeli nganye nganye. Ke unokwazi ukuba ulindele ntoni kulowo nalowo kubo. Kuba luluhlu lwezona zinto zahlulwe kakhulu ukuba uphawu lusishiya.
Imodeli elula kakhulu eyenziwe yinkampani kumsitho. Isixhobo esilandela ukuzibophelela kukaNokia ukumilisela iinguqulelo ezihlaziyiweyo zee-smartphones. Kule meko, sifumana ingxelo ehlaziyiweyo enonxibelelwano lwe2,5G, njengoko isitsho inkampani kwinkcazo yayo. Yimodeli ekhumbuza uninzi lwee-smartphones ze-brand zakudala. Umsebenzi olula, kodwa ukongeza ekubeni unethuba lokunxibelelana ne-Intanethi.
Ujongano lomsebenzisi luhlaziyiwe, ukugcina ukusetyenziswa kwefowuni ngokulula, nangona kungoku okwangoku ngakumbi ngaxeshanye. Ibhetri ithembisa ukunika abasebenzisi ubomi bhetri benyanga enye. Sine-Radio ye-FM emnxebeni, Ukongeza kwi-Opera Mini njengesikhangeli. Ke ngoko, sijamelene nemodeli esisiseko, kodwa ngokuqinisekileyo inabaphulaphuli bayo.
Kulindelwe ukuba esi sixhobo siza kusungula ngexabiso leedola ezingama-35. Ukuphehlelelwa kwayo kucwangciselwe iveki ezayo, njengoko besitshilo kwinkcazo yabo. Ukongeza, iya kuba nakho ukuthenga ngemibala emithathu: emhlophe, emnyama nebomvu.
Imodeli ngaphakathi kuluhlu oluphantsi lwenkampani. Esi sixhobo siza ne-Android Go, Sele inenguqulo yayo yePie ye-Android. Ke iba yeyokuqala uphawu ukuba le nguqulo ngokwendalo, ube ngowesibini emva ko-2.1 awayeyihlaziya kule veki. Sijongene nefowuni esisiseko, ngaphandle kokuzenzisa kakhulu, kodwa ethembisa ukuyizalisekisa ngokusebenza kuluhlu lwayo. Kodwa oko ngokungathandabuzekiyo kuya kuba nabaphulaphuli abacacileyo kwimakethi ye-Android.
Ukucaciswa kobuchwephesha iNokia 1 Plus
Umzekelo 1 Plus
Inkqubo yokusebenza Ipie ye-Android 9.0 (uHlelo lwe-Android Go)
Isikrini I-5.45 intshi IPS ene-FWVGA + Resolution kunye ne-18: 9 ratio
Inkqubo IMediatek MT6739WW
i-ram 1 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi 8 GB
Ikhamera esemva MP eyi-8 ene-LED
Ikhamera yangaphambili 5 MP
Conectividad I-GPS GLONASS iBluetooth 4.2 Dual SIM microUSB 2.0 WiFi 802.11 ac
Ezinye izinto Izindlu eziguqukayo zerediyo ye-FM
Ibhetri 2.500 mah
Ubukhulu X x 145.04 70.4 8.55 mm
U bunzima -
Ixabiso IRandi ye99
Ixabiso lesi sixhobo liza kuba yi- $ 99, njengoko kubonisiwe kwintetho. Kule meko, ukumiliselwa kwayo kufuneka ulinde ithutyana, kuba izakwaziswa ngenyanga kaMatshi. Nangona singenawo umhla othile ngoMatshi woku. Iya kufika ngemibala emithathu: luhlaza okwesibhakabhaka, mnyama namnyama.
Ngelo xesha ayaziwa ukuba iza kuba nexabiso elingakanani eYurophu esi sixhobo sophawu. Nangona kuyinto ekufuneka siyazi kungekudala. Utshintsho zii-euro ezingama-87, nangona kunokwenzeka ukuba ziya kubiza kakhulu ekumiselweni kwayo kwimarike yaseYurophu. Kodwa silindele isiqinisekiso esivela kuNokia.
I-smartphone elandelayo ethi uphawu lusishiyile kulo msitho yile modeli. Isixhobo esine-Android One njengenkqubo yokusebenza. Ubhejo olutsha lwentengiso kuluhlu oluphakathi. Sifumana imodeli yesithathu okanye isizukulwana sesithathu sale Nokia 3. Kwisizukulwana ngasinye sifumana uthotho lweenguqu, esinokuzibona kwesi sixhobo.
Ke iyaqhubeka nokuba lukhetho olufanelekileyo kuluhlu lwayo. Ukucaciswa kwayo ngokupheleleyo zezi:
Ukubalulwa kobugcisa iNokia 3.2
Inkqubo yokusebenza Ipie ye-Android 9.0 (Android One)
Isikrini I-6.26-intshi TFT ene-HD + isisombululo se-1.520 x 720 pixels
Inkqubo Qualcomm Snapdragon 429
i-ram 2 / 3 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi 16 / 32 GB
Ikhamera esemva 13 MP ngeFlash
Conectividad I-Wi-Fi 802.11 b / g / n iBluetooth 4.2 GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou
Ezinye izinto Isitshixo senomathotholo somfundi weFingerprint weminwe yokuvula ubuso bukaMncedisi kaGoogle
Ibhetri 4.000 mah
Ubukhulu 159.44 x 76.24 x 8.6mm
U bunzima I-178 gram
Ixabiso 149.99 euro
Sijongene nemodeli ethi ithembisa ukunika inkululeko enkulu, kunye nebhetri yayo ye-4.000 mAh. Luluhlu oluphakathi olungqongqo, oluye lwahlaziywa yiNokia kakhulu. Uyilo olunotshi kwimilo yedrophu yamanzi, isikrini esikhulu, ukongeza ekubeni zombini inzwa yeminwe kunye nokuvula ubuso. Akukho nto inomtsalane ngokweenkcukacha, kodwa iya kudibana ngalo lonke ixesha ngokomsebenzi.
Esi sixhobo siza kubetha ezivenkileni kwiinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo, kuxhomekeke kwindibaniselwano ye-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Eyokuqala, ene-2/16 GB, iya kuphehlelelwa ngexabiso le-149,99 euro. Ngelixa iifayile ze Inguqulelo ene3 / 32 GB iya kufika ngexabiso le-179,99 euro ezivenkileni.
Iya kuthengiswa kwiintsuku ezimbalwa ezizayo., njengoko iqinisekisiwe yiNokia uqobo. Abasebenzisi abanomdla kolu luhlu oluphakathi baya kuba nakho ukuyithenga emnyama nangesilivere.
Inguqulelo ehlaziyiweyo yeNokia 4 yimodeli yamva nje ukuba uphawu lusishiyile kwinkcazo-ntetho yalo kwi-MWC 2019. Ukongeza, iza nekhamera ngasemva kabini, sinescreen esine-notch ekwimo yokwehla kwamanzi, umfundi weminwe, iqhosha loMncedisi kaGoogle kunye ne-NFC kwisixhobo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukhetho olunomdla kakhulu phakathi kuluhlu oluphakathi.
Njengoko kuqhelekileyo kwii-smartphones zohlobo, iza ne-Android One njengohlobo lwenkqubo yokusebenza ngokwendalo. Uneminyaka emithathu yokuhlaziywa okuqinisekileyo ngale ndlela. Ngaphandle kwamathandabuzo, sijamelene neyona fowuni igqibeleleyo yale nkalo iphakathi yenkampani, eboniswe kwi-MWC 2019.
Ukubalulwa kobugcisa iNokia 4.2
Isikrini I-5.71-intshi TFT LCD ene-HD + Resolution (1.520 x 720 pixels)
Inkqubo Qualcomm Snapdragon 439
Ukugcinwa kwangaphakathi I-16/32 GB (yandiswa ukuya kuthi ga kwi-400 GB nge-MicroSD)
Ikhamera esemva I-13 + 2 MP enezinto f / 2.2 kunye f / 2.2
Ikhamera yangaphambili MP engama-8 ene-f / 2.0 ukuvula
Conectividad Indawo yokudibanisa
Ezinye izinto Isinxibelelanisi somnwe weFingerprint seqhosha leRadio kwiNFC kaMncedisi kaGoogle
Ibhetri I-3.000 mAh eneTurboCharge ekhawulezileyo
Ubukhulu 148.95 x 71.30 x 8.39mm
U bunzima I-160 gram
Ixabiso 169.99 euro
Yeyona modeli igqwesileyo iboniswe yinkampani kolu luhlu lwe-MWC 2019. Inketho elungileyo phakathi kuluhlu oluphakathi, oluhlaziyiweyo ngokubonakalayo. Isikrini esine-notch ekubunjweni kwethontsi lamanzi kunye nezakhelo ezincinci.
Ukuze uthenge le Nokia 4.2 kuya kufuneka silinde kude kube ngu-Epreli. Kuqinisekisiwe ukuba ukumiliselwa kwayo kuyakwenzeka ngelo xesha, njengoko isitsho nenkampani uqobo. Khange kuthiwe ukuba sisindululo sehlabathi, nangona yile nto ibichaziwe kuye.
Sifumana iinguqulelo ezimbini zefowuni. Inye ene-2/16 GB eya kumaxabiso kwi-euro ye-169,99. Ngelixa uguqulelo lweli nqanaba liphakathi kunye I-3/32 GB iya kuza ngexabiso lama-euro ayi-199,99. Kule meko, iya kukhutshwa ngemibala emibini: emnyama nepinki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » INokia iveza uluhlu lwayo olutsha lweefowuni kwi-MWC 2019
I-TCL ibonisa ii-smartphones zayo ezinokusongelwa nge-DragonHinge kunye neekhamera ezahlukeneyo kwi-MWC 2019
INokia 9 PureView: I-smartphone eneekhamera ezintlanu ezisemva ngokusemthethweni